उनीः पहिलो च्याप्टर | Suman Khadka
Suman Khadka — May 5, 2019 in Stories
अक्सर गर्मीले पसिना बग्ने वैशाखमा आजभोलि पानी बगिरहेको छ । आकाश रोइरहेको छ । अनि धर्ती चाहिँ रुझिरहेको छ । यता म भने भिजेको छु ।
भिज्नु र रुझ्नु त नियति जस्तो लाग्छ जिन्दगीको । जसरी आँखा रुझ्छन र परेली भिज्छन् । गल्लीहरू चिसा छन् । मानौँ यहाँ बषौँदेखी घामको आँखाले देखेको छैन । बस् देखेका छन् त मानवीय कंकाल बोकेका उनीहरूकै जोडी जुत्ताका नयनहरूले । कहिलेकाहीँ त लाग्छ, कतै यी जुत्ताहरूले पनि आँखा चिम्लेर हिँडिरहेका त छैनन् ?
खैर, म हिँडिरहेको छु । म होइन क्यारे मेरा खुट्टाहरू । खुट्टाले पहिरिएका जुत्ताहरू हिडिरहेका छन् । मेरा श्वास र पाइलाहरू एउटै चालमा हिँडिरहेका छन् । म बस्ने डेरा पुग्न अझै एक किलोमिटर पर होला । ३ सय मिटर हिलोमा तैरिएपछि फेरि सात सय मिटर खुट्टा कुदाउनुपर्छ । यतिकै दुरी नाप्ने दुस्साहस गर्छु । हिलो भए पनि मलाइ त्यो बाटो असाध्यै मन पर्छ । मन पर्छ यो कुरामा कि त्यो बाटो छोटो छ ।
मलाइ छोटो र छिटो एकदम मन पर्छ । दुरी सधैँ जसो एउटै हुने गर्छ तर पनि म कहिलेकाहीँ चाँडै पुग्छु त कहिलेकाहीँ ढिला । सायद पाइलाहरु पनि कहिलेकाहीँ लामा छोटा भएर हिँड्छन् ।
हम तेरे सहर में आये हैं, मुसाफिर की तरह
सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका देदे…
कानमा गुलाम अली गुञ्जिरहेका छन् । सिमसिम पानी परिरहेको छ । रिमझिम बतास चलिरहेको छ । समग्रमा भन्दा मौसम बडो रोमान्टिक छ र यो शहर बडो कामुक । कयौंका लाज ढाक्दै बन्द भइरहेका छन् झ्याल ढोकाहरु । भित्री भित्ताले कान थाप्दै सुनिरहेको होला चिच्याहट । म आफ्नो बाटोको दुरी नाप्दै हिडिरहेको छु । श्वासले समय घटाउँदै बढिरहेको छु । लाग्छ, हामी समयलाई श्वासले नाप्छौँ । श्वास चल्दासम्म मात्र हो हाम्रो जीवन । श्वास रोकिएपछि ?
गुलाम अलीको श्वास रोकिन्छ । मेरो गोजी भाइब्रेट हुन्छ । गोजीबाट मोबाइल झिक्छु । एक हप्ता अघि सेभ गरेको नाम देखा पर्छ स्कृनमा । राइट स्वाइप गर्छु ।
“हाई । के गर्दै हुनुहुन्छ ?“
उनको मलिन अनि सुरिलो स्वरले गुलाम अली बिर्साइदियो । उनका प्रश्नहरु पनि सुमधुर कालजयी गीत लाग्न थाले । एक मनले त भन्यो, यही स्वरमा मुग्ध बनिदिऊँ । तर त्यो सम्भव थिएन । किनकि त्यो प्रश्न थियो, कुनै गीत थिएन ।
“हिँडिरहेको छु । “
“कहाँ जाँदै ?“
“कोठा जाँदै ।“
“खाजा खानुभयो ?“
“के खानुभयो ?“
“कुन मःम ?“
एक हप्तादेखि यस्तै यस्तै प्रश्नहरूले घेरिएको छु म । त्यो घेराबाट उम्कन यस्तै सजिला उत्तरहरू फर्काउने प्रयास गर्छु । तर यी प्रश्नहरू लगत्तै भने केही त्यस्ता प्रश्नहरूले बाँधिएको छु, जसको उत्तर मैले सायदै पत्ता लगाएर फुत्किन सकुँला ।
आजभन्दा त्यस्तै ७ वर्ष पहिले हाम्रो कक्षामा एउटा नयाँ अनुहारले प्रवेश पायो । वैशाखको पारिलो घामले तातिएर रातो अनुहार लिएर उनी कोठाभित्र छिरिन् । स्कुल भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यसैले पनि कोठाभरि फैलिएका हामी कसैले ड्रेस लगाएका थिएनौँ । उनी भने ड्रेसमा सजिएर भित्र छिर्दा सबैको ध्यान तान्न सफल भइन् । कोठामा छिर्ने बित्तिकै अगाडि रहेको खाली बेन्चमा बसिन् । एक मन त लाग्यो उनीसँगै गएर बसिदिऊँ । अनि भनिदिऊँ कि यो क्लासको प्रथम हुने विद्यार्थी म नै हुँ । तिमी र म साथी बनौँ । म तिमीलाई सब सिकाउँछु । तर यो मन, सोच्नलाई कुनै कसर बाँकी नराखी सोच्छ अनि गर्दा एक पाइला पनि अघि बढ्दैन ।
पहिलो पिरियड पढाउने सर आउनुहुन्छ । ब्ल्याकबोर्डमा चकका नितम्ब समाउँदै काउकुती लगाएझै कोर्नुहुन्छः
हामी सबै सतर्क हुन्छौँ । पहिलो क्लास भएरै होला, परिचयात्मक कार्यक्रमबाट ४५ मिनेटको सुरुवात हुन्छ ।
“कहाँबाट सुरु गरौँ परिचय ?“
सरले आफ्नो परिचय दिएर हामीहरूलाई सोध्नुहुन्छ ।
“उ त्यहाँबाट ।“
हातको इसाराले उनीतिर देखाउँदै म भन्छु । सबै गलल हाँस्छन् । उनी लाजले रातो अनुहार पार्दै टाउको भुइतिर निहुर्याउछिन् । मलाइ ग्लानिबोधले समात्छ ।
“होइन, आज पछाडिबाट परिचय अगाडी बढाऊँ ।“
सरले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ । मलाइ भने सरको मुस्कान थुतेर कुकुरलाई खुवाइदिऊँ जस्तो हुन्छ । किनकि मलाई पहिलो चोटि कसैको मुस्कानसँग घृणा उत्पन्न भइ रहेथ्यो । म छिटो र छोटो मन पराउने मान्छे त्यो मुस्कानले ढिला र लामो बनाइरहेको थियो उनको परिचय । क्लासभरि छरिएका विद्यार्थीहरू कसैलाई देखिनँ । कसैलाई सुनिनँ । बस् सुने त उनीले नभनेको परिचय । देखेँ त उनको घोप्टो परेर छोपिएको अनुहार ।
समय एकदम ढिला बगिरहेको आभास भैरहेथ्यो । सर मात्र होइन अहिले त अरू सबै विद्यार्थीहरू सँग पनि रिस उठिरहेको थियो । मनमनै लाग्थ्यो कोही बोल्न नसक्ने भइदिनु नि । शिवाय उनी ।
घण्टौँ बितेजस्तो लाग्ने समयपछि उनको पालो आयो । उनी जुरुक्क उठ्छिन् र भन्न थाल्छिन् ।
“नमस्ते । माई नेम इज अनन्ता, आएम फ्रम दाङ ।“
पहिलो च्याप्टरः इतिश्री !
किप वेटिङ फर नेक्स्ट च्याप्टर अफ उनी !
कमिङ भेरी सून …
यो कथा सल्लेरी खबरको लागि लेखिएको पाक्षिक स्तम्भ हो |